Marka aan Sabirka kaashanno! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka May 2, 2017	0 1,210 Views
Muqdisho (Himilonews) – Tiirarka ugu weyn ee qofka u horseeda liibaan waarta iyo danbi dhaaf uu ka kasbado xagga Alle, waxaa kamid ah sabirka. Qof kasta wuxuu la miisaan yahay heerka uu ku eg yahay dulqaadkiisu. Si kooban marka loo yiraahdana, sabirku waa tallaabta kala reebta guulaha ay gaaraan dadka. Haddaanu jirin sabir la isku imtixaano, lama maqleen guuleystayaal iyo guul-darreystayaal.
Previous: Tusmada laga qaato Shaqsiyaadka Xanaaneeya Bisadaha